Hitanao ve izay alain'i Google? | Martech Zone
Talata, Oktobra 23, 2012 Douglas Karr
Googlebot dia bot Google mandady amin'ny tranokala (antsoina koa hoe "hala)". Ny crawling dia ny dingana izay ahitan'i Googlebot pejy vaovao sy havaozina hatao amin'ny index Google. Mampiasa solosaina goavambe izahay haka pejy (na "mandady") an'arivony tapitrisa amin'ny tranonkala. Googlebot dia mampiasa dingana algorithmika: ny programa amin'ny solosaina no mamaritra ny tranokala handady, isaky ny impiry ary firy ny pejy halaina isaky ny tranonkala. Avy amin'i Google: Googlebot
Google dia mandray, mandady ary misambotra ny atiny amin'ny pejy tsy mitovy amin'ny mpizaha. Ny While Google afaka mandady scripting, izy io tsy midika izany fa hahomby hatrany. Ary satria fotsiny hoe mizaha fanodinana ao anaty tranokala ianao ary miasa dia tsy midika izany fa mamily lalana an'io fifamoivoizana io ny Googlebot. Nahita fifanakalozan-kevitra teo amin'ny ekipanay sy ny orinasa mpampiantrano alohan'ny hahalalanay ny zavatra ataon'izy ireo… ary ny lakilen'ny fikarohana dia ny fampiasana ny Raiso ho Google fitaovana amin'ny Webmasters.
Ny fitaovana Fetch as Google dia mamela anao hiditra amin'ny làlan'ny tranokalanao, hahita raha afaka nandady azy i Google na tsia, ary nahita ny atiny nandady toa an'i Google. Ho an'ny mpanjifanay voalohany, afaka nampiseho izahay fa tsy mamaky ilay script i Google araka ny nantenain'izy ireo. Ho an'ny mpanjifanay faharoa dia afaka nampiasa fomba hafa izahay hamerenana ny Googlebot.
Raha hitanao izany Hadisoana mandady ao anatin'ny Webmasters (ao amin'ny faritra Fahasalamana), ampiasao ny Fetch ho Google mba hizaha toetra ny làlan-kalehanay ary hijerena ny atiny izay raisin'i Google.
Tags: haka an'i googlebotGooglebothala